Ɛyɛ a Wo ne Onyankopɔn Bɔ Nkɔmmɔ?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Zande Zulu
ASƐM A ƐDA SO | WOBƐTUMI AFA ONYANKOPƆN ADAMFOƆ
Nnamfo deɛ, hokwan biara a wɔbɛnya no, wɔn mu biara bɔ mmɔden sɛ ɔbɛte ne yɔnko nka. Wɔtumi bɔ nkɔmmɔ wɔ tɛlɛfon anaa kɔmputa so, anaasɛ wɔtwerɛ wɔn ho krataa. Onyankopɔn nso, sɛ yɛne n’adamfofa bɛdi mu a, ɛsɛ sɛ yɛtaa ne no bɔ nkɔmmɔ. Nanso yɛbɛyɛ dɛn ayɛ saa?
Sɛ yɛbɔ mpaeɛ a, ɛkyerɛ sɛ yɛne Yehowa rebɔ nkɔmmɔ. Nanso ɛnyɛ yɛn tipɛn ne Onyankopɔn. Enti sɛ yɛne no rebɔ nkɔmmɔ a, ɛsɛ sɛ yɛhu kwampa a yɛbɛfa so ne no akasa. Ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ yɛne Onyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asase ne emu nneɛma nyinaa na ɛrekasa. Enti ɛsɛ sɛ yɛne no kasa obuo ne nidie mu. Sɛ Onyankopɔn bɛtie yɛn mpaebɔ aso pa mu a, ɛnneɛ ɛhia sɛ yɛdi ɛho akwankyerɛ so. Akwankyerɛ no mu mmiɛnsa na ɛdidi so yi.
Nea ɛdi kan, Yehowa Nyankopɔn nkutoo na ɛsɛ sɛ yɛbɔ no mpaeɛ. Ɛnsɛ sɛ yɛbɔ Yesu, “ɔhoteni,” anaa ohoni biara mpaeɛ. (Exodus 20:4, 5) Bible ka no pefee sɛ: “Momfa mpaebɔ ne nkotɔsrɛ ne aseda so mfa mo adesrɛ nto Onyankopɔn anim adeɛ nyinaa mu.” (Filipifoɔ 4:6) Nea ɛtɔ so mmienu, sɛ yɛrebɔ mpaeɛ a, ɛsɛ sɛ yɛbɔ wɔ Onyankopɔn Ba Yesu Kristo din mu. Yesu ankasa kaa sɛ: “Obiara mma Agya no nkyɛn gye sɛ ɔnam me so.” (Yohane 14:6) Nea ɛtɔ so mmiɛnsa, ɛsɛ sɛ yɛn mpaebɔ ne Onyankopɔn apɛdeɛ hyia. Bible ka sɛ: “Biribiara a yɛbisa sɛdeɛ n’apɛdeɛ teɛ no, ɔtie yɛn.” *—1 Yohane 5:14.
Nnamfo pa taa bɔ nkɔmmɔ. Wei ka bi a, na wei nso aka bi
Nanso, sɛ nnipa mmienu fa adamfoɔ na sɛ da biara baako nko ara na ɔkasa a, ɛbɛyɛ dɛn na adamfofa no agyina? Yɛne Onyankopɔn adamfofa nso, saa ara na ɛteɛ. Ɛsɛ sɛ yɛma ɔno nso kasa kyerɛ yɛn. Ɔkasa nso a, ɛsɛ sɛ yɛtie. Wonim ɔkwan a Onyankopɔn fa so ne yɛn kasa?
Yehowa Nyankopɔn nam n’Asɛm Bible so na ɛkasa kyerɛ yɛn nnɛ. (2 Timoteo 3:16, 17) Dɛn na ɛma yɛka saa? Wo deɛ ma yɛnyɛ mfatoho bi: Fa no sɛ wowɔ hɔ ara na wonyaa krataa fii w’adamfo paa hɔ. Wokenkan wie a, ebia wode anigyeɛ bɛkeka akyerɛ nkurɔfoɔ sɛ, “Mate m’adamfo nka o!” Nanso woante ne nne, twerɛ na ɔtwerɛɛ wo. Bible te sɛ saa krataa no. Sɛ wokenkan a, na worema Onyankopɔn akasa akyerɛ wo. Ɛno nti, Gina a yɛkaa ne ho asɛm wɔ Ɔwɛn-Aban yi ahyɛase no kaa sɛ, “Sɛ Onyankopɔn bɛfa me adamfoɔ a, ɛnneɛ Bible a ɛte sɛ ‘krataa’ a watwerɛ ama yɛn no, ɛsɛ sɛ mekenkan.” Ɔtoaa n’asɛm no so sɛ, “Bible a mekenkan no da biara no ama me ne Onyankopɔn adamfofa no mu ayɛ den.” Wo nso ɛ? Wokenkan Onyankopɔn Asɛm Bible no da biara? Woyɛ saa a, ɛkyerɛ sɛ wo nso woama Yehowa rekasa akyerɛ wo, na ɛno bɛma mo adamfofa no asɔ.
^ nky. 5 Sɛ wopɛ Onyankopɔn adamfofa ho nsɛm pii a, hwɛ nhoma a wɔato din Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? no ti 17. Yehowa Adansefoɔ na wɔtintimii.